Fantaro i Simona Mayo, mpampiantrano ny kaonty Twitter @ActLenguas ny 21 ka hatramin’ny 28 Janoary 2019 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2019 15:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Esperanto , Română , Español
Amin'ity taona 2019 ity izahay manasa olona isankarazany hitantana ny kaonty Twitter @ActLenguas (Fikatrohana ara-teny) ka hizara ny zava-niainany avy tamin'ny famelomana indray ny tenin-drazan-dry zareo sy ny fampiroboroboana izany. Ity lahatsoratra ity moa miresaka momba an'i Simona Mayo, sy izay kasainy horesahana mandritra ny herinandro hampiatranoany izany.
Rising Voices (RV): Miangavy mba lazao anay ny mombamomba anao.
Simona Mayo no anarako, avy any Ngulumapu-Wallmapu (zaratany Mapuche any Shily) aho. Monina ao Santiago de Chile aho ary manoka-tena amin'ny fameloma-maso indray ny fiteny Mapudungun any amin'ny sehatra an-tanandehibe sy hanao fikarohana momba ity lohahevitra ity.
RV: Aiza ho aiza moa izany ny fiteninareo an-tserasera sy ivelan'ny serasera?
Velona ny fiteny Mapudungun izay mihamatanjaka amin'ny alalan'ireo taranaka vaovao miteny izany ao Shily sy Arzantina. Maro amin'ny mpiteny azy no olon-dehibe sy zokiolona ka ilaina mihitsy ny tanora handray ny Mapudungun ho fiteny faharoa mba ahafahany miavo-tena.
Nitombo ny fisiany ato amin'ny aterineto tao anatin'ny dimy taona noho ireo fanorenan'asa isakarazany miezaka ny hampiditra azy ao amin'ny tambajotra an-tserasera, toy izay efa ananan'ny Kimeltuwe.
RV: Lohahevitra tahaka ny ahoana moa izany no ifantohanao mandritra ny herinandro hitantananao ny kaonty Twitter @ActLenguas ?
Hifantoka amin'izay hetsika mifandraika amin'ny fiteny Mapudungun izay ho entina ao amin'ny asa tanterahana amin'ny herintaonan'ny fiteny zanatany ao Shily sy Arzantina aho.
RV: Inona no hery voalohany nandrisika anao hazoto hikatroka an-tserasera hanandratra ny tenin-(drazan)ao?
Ny tanjoko voalohany dia ny handray anjara hisian'ny taranaka vaovao mpiteny azy sy hampiely ny fiteny any amin'ny sehatra izay voafetra ny fijoroany. Kendrena ny hananan'ny mpiteny azy zo halalaka amin'ny fitenenana azy sy ny hahazoan'ny tanora ho afa-mianatra ny fiteny Mapuche, ho tenin-drazany, izay tsy azony atao amin'izao fotoana izao noho ny fisian'ny fanjanahantany tao Shily sy Arzantina vao haingana. Ny fitadiavan-drariny ara-piarahamonina sy ara-pitenenana ho an'ny vahoakako no hery mpandrisika ahy.